Siyaasi maxamud aadan“PL Qabiil ayay Ku Taageeraysaa Axmed Madoobe”,+Dhageyso | Baahin Media
Qeyla dhaanta kasoo yeereysa musharaxiinta iyo siyaasiyiinta reer Jubaland ee aan la dhacsaneen hanaanka doorashada Jubaland ayaa sii kordheysa iyadoo dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha Somalia ay qoraal kasoo saartay doorashada Jubalanad oo qorshuhu yahay inay dhacdo bisha soo aadan ee August.
Siyaasi maxamud aadan xuseen oo kasoo jeedo deegaanada Jubooyinka ayaa si kulul uga hadlay dowrka Puntland ay ka ciyaareyso doorashada Jubaland iyo sidii lagu aas’aasay maamulkaas.
Siyaasigu waxa uu sheegay in maamulka Jubaland lagu aasaasay si awood ah oo beelaha qaar xaqooda la duudsiiyey waxa uuna arrintaasi ku eedeeyey inay ka dambeeyeen General Gabre, Maxed Cabdi Afey, masuuliyiinta waqooyi bari kenya iyo dowlad goboleedka Puntland.
Siyaasigan ayaa sheegay in Jubaland ay ka taliso islamarkaana kuraaska baarlamanka beeshaasi ay ku leedahay 51 kursi.
Mar uu ka hadlayey taageerada Punland ee doorashada Jubaland ayuu sheegay siyaasigu in tahay taageero ku dhisan hab qabiil, waxa uuna ayaan darro ku tilmaamay in Puntland ay ku taageerto Axmed Madoobe habka uu wax u wado ee ah xulashada xildhibaanada iyo maareynta mushariciinta.